Sadiq Haibe: Booliska Norwey waxay i waydiiyeen inaan aqoon dad ka yimid Jabuuti, Kenya iyo Ethopia oo soomaalinimo isku dhiibay - NorSom News
Sadiq Haibe: Booliska Norwey waxay i waydiiyeen inaan aqoon dad ka yimid Jabuuti, Kenya iyo Ethopia oo soomaalinimo isku dhiibay
Sadiq Farah Haybe ayaa mar labaad lasoo xiriiray warbaahinta NorSom News, isaga raba oo inuu bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan Norwey la qaybsado warbixin kale oo ku saabsan in ay booliska Norwey, gaar ahaan kuwa magaalada Drammen ay waydiiyeen su aal ah inuu garanayo dad ka yimid wadamada Ethopia, Kenya iyo Jabuuti oo isku dhiibay, wadankana ku jooga inay Soomaaliya ka yimaadeen. Sadiiq ayaa hadalkiisa ku bilaabay sidatan:
Kadib markii uu ii dhamaaday waraysiga iyo su aalaha aniga ii gaarka ah, ayuu ninkii aniga kiiskeyga qaabilsanaa i waydiiyay su aal ah: Inaan garanayo dad ka yimid wadamada Ethopia, Kenya iyo jabuuti oo isku dhiibay inay Soomaaliya ka yimaadeen. Waxaan ugu jawaabay haa, waan aqaan. Wuxuuna intaas kadib i su aalay inaan u sheegi karo dadka ay yihiin iyo meesha ay daganyihiin. Sadiq ayaa sheegay inuu isaga oo yaaban ninkii booliska ahaa ugu jawaabay inuusan u sheegeyn, una sheegi doonin abidkiis. Intaas kadib ayuu si beerlaxawsi ah ii waydiistay inaan arintan ka caawiyo maadaama uu isagaba wax badan howsheyda faraha kula jiray oo uu iga caawin jiray. Waxaan ugu jawaabay: inaad i caawiso waa shaqadaada, balse inaan adiga ku caawiyo shaqadeyda ma ahan.
Hadii uu sadiiq maya yiri imisa qof ayaa haa tiri:
Waxaa isbuucyadii ugu danbeeyay aan wax ka qoreynay Eng. Mahad Abiib Mahamoud oo ah muwaadiin soomaaliyeed oo wadankan degenaa mudo 16 sano oo sharciga dhalashada wadanka loogala noqday sababo la xiriira in ay dad kale soo jaajuuseen, oo ku UDI-da u sheegeen inuu jabuuti ka yimid. Sidoo kale Sadiq Farah Haybe ayaa sheegay in uu garanayo wiil sharciga magangalyada wadanka loogala noqdey, kadib markii dad ay asxaab yihiin ay soo jaajuuseen. Maalmihii ugu danbeeyay waxaa sidoo kale suuqa ku jiray sheeko ku saabsan labo gabdhood oo soomaali ah oo dagaal gacan hadal ah dhexmara. kadib markii uu boolisku midba si gaar ah u waraysanayay ay waydiiyeen su aal ah inay bal informasjon xaga sharciga ah oo ku saabsan gabadha kale ay u sheegto, maadaama ay isdagaalsanyiniin(Arintan ma hubno, maadaama aysan NorSom News kasoo xigan karin qof xog agaal u ah, balse sheekada gabdhahan suuqa ayay aad ugu jirtaa maalmahan).
Odhaahda NorSom News: Xildhibaan xil ma idin dhibaa?
Soomaalida Norwey degan oo tiro ahaan gaaraya, wali ma aysan ku guulaysan in ay yeeshaan xildhibaan soomaaliyeed oo ku matala golaha baarlamaanka Norwey, balse taa badalkeeda waxaa jiro siyaasiyiin soomaaliyeed oo ilaa 30 gaaraya oo kujiro golaha deegaanada magaalooyinka waaweyn ee wadanka. Marka laga reebo Baashe Muuse oo hadla mar walbe oo dhib dhacdo, ma jiro ilaa hada xildhibaan kale oo soomaaliyeed oo inta warbaahinta Norwey tagay gudbiyay tareenka shacabka soomaaliyeed ee ku saabsan howlahan sharciyada. Xildhibaanow, waxay dadku idiin doorteen ma ahan inaa sidii sawiro aad golaha deegaanada surnaataan, ee waa inaad noqotan wajiga iyo afka dadka soomaaliyeed ee codkooda idinku geeyay meesha aad maanta fadhidaan.Waxa hada booliska iyo UDI-du ay usoo dhigteen dabagalka iyo argagixinta shacabkii aad matalayseen, hadii aydaan maanta kicin oo ka dhiidhyin, goormeed kacaysaan. Ma markii la gaaro doorashada oo nin walbaa uu reerkiisa hoosta ka galo, si ay codka reer hebel ahaan iyo faan u siiyaan. Hadii aad maanta dadka aad ka dhuumataan, bari maxaad u sheegi doontaan, markii aad isa soo sharaxaysaan. Ururo iyo dad aaan soomaali aheyn ayaa mar walbe difaacayo danaha dadka soomaaliyeed, idinka difaac daayee, hadalkiinaba lama hayo. Waa su aale, xildhibaanow xilka aad wadataan ma idin dhibaa, mise waxaad u wadataan magac guud ahaan?
Sadiq Farah Haybe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la tago warbaahinta wadanka hadii ay jiraan xildhibaano ama dad kale oo raba inay arintan ka hadlaan oo gudbiyaan warbaahinta. Hadii aysan arintan sii xoogaysato, waxaa hubaal in ay lumi doonto kalsoonida ka dhaxaysa booliska iyo soomaalida Norwey.
Previous article8 wiil oo qaar soomaali yihiin oo maanta lagu xukumay Oslo.
Next articleSadiq Haibe: Booliska Norwey waxay i waydiiyeen inaan aqaano dad ka yimid Jabuuti, Kenya iyo Ethopia